Aydın Denizli Wadada Wadnaha ee Ucid | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean09 AydinAydın Denizli Motorway to Tender
25 / 03 / 2020 09 Aydin, 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
aydin bada bada wey u damqaneysaa
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha guud ee Hay'adaha Wadooyinka
Mashruuca Aydın-Denizli ee Wadada Wadnaha, oo leh qaabka wareejinta-wareejinta, ayaa lagu dhawaaqayaa iyada oo la raacayo habka iibka dhammaan hindise-bixiyeyaasha.
TALADA QALBIGA KHATARTA QALBINTA KALIYA GUJI GUUD TAARIIKHDA / WAQTI
Mashruuca Wadada Aydın-Denizli waxaa lagu dhisidoonaa habka loo helo dalab qaaliya oo ka mid ah tartamayaasha oo dhan oo leh 'Model-Work-Transfer Model'. 50.000 TL (Konton Kun Konton)
pound) 25.000.000 TL (Labaatan iyo shan milyan)
1- "Aydın-Denizli Mootada Mashruuca", sida ku xusan mashruuca iyo faahfaahinta farsamo ee ku lifaaqan faahfaahinta Maamulka, qandaraaska dhismaha, howlgalka iyo wareejinta shaqada iyada oo la raacayo qaabsocodyada iyo mabaadi'da lagu qeexay Sharciga Lambar 3996 iyo go'aanka Golaha Wasiirrada ee la tiriyay 2011/1807; Taarikhdu markay tahay 12/05/2020, 10:30 waqtiga Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Agaasinka Guud ee Wadooyinka, Yetecetepe / ANKARA A-Block Entrance Floor waxaa lagu qaban doonaa iyadoo la raacayo habraaca qaabilaada dalabyada ka dhexeeyo tartamayaasha oo dhan hortooda guddiga komishanka.
2- SOO SAARIDDA Qandaraaska: Dhammaan noocyada maalgelinta, mashruucyada, dhismaha, hawlgalka, muddada hawlgalka Dhamaadka dayactirka, dayactirka iyo qandaraaska, Wadada waa in lagu wareejiyaa Maamulka lacag la’aan nooc kasta oo deyn ah iyo ballanqaadyo, dayactir, shaqeyn, la istcimaali karo oo lacag la’aan ah.
3- Qandaraasleyaasha; Laga bilaabo 30/03/2020, waxay ku arki karaan qandaraaska qandaraaska oo lacag la’aan ah Agaasimaha Guud ee Agaasinka Guud ee Wadooyinka, Waaxda Maamulka Ganacsiga, B-Block Floor: 3. Qiimaha iibka qiima dhimista hindisada (VAT waxaa ku jira)
Waa 50.000 TL (Konton Kun oo Turkish Lira). Qandaraasleyda doonaya in ay ka qeybqaataan qandaraaska ayaa heli kara gundhigga qandaraaska iyaga oo ka dalbanaya Agaasimaha Guud ee Agaasinka Guud ee Wadooyinka, si ay u helaan risiidkooda, ka dib markii ay u xareeyeen qiimaha faylka Agaasinka Guud ee Xisaabaadka, Koontada ugu Dambeysa iyo Warbixinta.
4- Cadadka Dammaanad Ku-Meel Gaarka ah ee maaddada ay ku shaqeyso waa 25.000.000 TL (Labaatan iyo shan milyan oo Turkish Liras ah). Qiimayaasha loo aqbali doono damaanad ahaan waxaa lagu qeexay Qodobka 6 ee faahfaahinta Maamulka.
5- Qandaraasyada waxaa loo dhiibi doonaa Agaasinka Guud ee Agaasinka Guud ee Wadooyinka, Waaxda Maamulka Ganacsiga, B-Block Floor: 7 Gudiga Gudiga Gudida oo gacanta lagu dhigto ama boostada laga bilaabayo ugu horeyn 10 (toddobada) maalmood kahor taariikhda qandaraaska. Bandhigyada la soo gudbiyo ka dib maalinta iyo saacadaha loo cayimay iyo dib u dhacyada dib looma aqbali doono. goobaha Time ee Radio iyo Television Turkey (TRT), goob saacba waa Authority lagama maarmaan ah.
6- Shuruudaha laga doonayo dadka kaqeybgalaya qandaraaska waxaa lagu qeexay qeexida Maamulka ee shaqada.
7- Shaqada hore loo sheegaa waxaa lagu fulinayaa si waafaqsan habraacyada iyo mabaadi’da ku xusan Xeerka 3996 iyo Go'aanka Golaha Wasiirrada ee la tiriyay 2011/1807.
8- Maamulka wuxuu gabi ahaanba xor u yahay inuu qabto shaqada loo idmaday ama haku imaanin xorriyaddaas darteed ee maamulka awgeed, wax soo iibsadeyaashu codsi kama ay soo sameyn karaan Maamulka wax magac ah.
Aydin-Denizli Gawaarida Shidaalka 3. Wakhtiyada dib loo dhigay
Aydin-Denizli Gawaadhida Gaarka ah ee la Oggolaaday
Aydın Denizli Double Line Railway wuxuu ka bilaabmayaa 2020
Denizli wuxuu dhegeysan doonaa jidka
CHP Sancar: "Mashruuca Aydın-Denizli wuxuu noqonayaa Qalabka Xulashada"
Wadada weyn ee Aydın-İzmir ayaa loo xirayaa gaadiidka
85 km Mashruuca Waddada Waddada North 41 oo aan dhamaysan bilaha
Mashruuca Golcuk Cable Carwada
Aydin-Denizli Gawaadhida Wadada